Hogaamiyaha Kooxda Dagaalka Kula Jirta Ciidanka Puntland Sh. Maxamed Attam Oo Ka Hadlay Dagaalada, Qarax Ka Dhacay Boosaaso Iyo Deegaanka Hadaaftimo Oo Laga Mudaharaaday | Araweelo News Network (Archive) -
Hogaamiyaha Kooxda Dagaalka Kula Jirta Ciidanka Puntland Sh. Maxamed Attam Oo Ka Hadlay Dagaalada, Qarax Ka Dhacay Boosaaso Iyo Deegaanka Hadaaftimo Oo Laga Mudaharaaday
images/stories/hadaaftimo.jpg Hargeysa(ANN) Hoggaamiyaha maleeshiyada dagaalka kula jirta maamulka Puntland ayaa sheegay in kooxdiisu ay dib uga guratay tuullada Galgala oo ay ciidanka Puntland gacanta ku dhigeen maalinnimadii shalay. Sheekh Atam, wuxuu xusay in wixii haatan ka danbeeya xeeladda dagaal ee ay adgeesanayaan ay noqon doonto mid “ku dhufo oo ka dhaqaaq ah”. Attam, wuxuu sidaa ku sheegay
waraysi uu siiyay Idaacada BBC-da laanteeda Af-soomaaliad, taas oo uu Attam sheegtay in maleeshiyadiisu ay khasaare gaadhsiiyeen ciidanka Puntland, wuxuuna sidoo kale ciidanka Puntland ku eedeeyay inay geysteen falal kala duwan oo ay ku jirto bililiqo iyo waliba gubista Beero ku yaala tuullada Galgala.
Sheekh Attam ayaa mar kale sheegay in aanu wax xidhiidh ah la lahayn kooxda Al-shabaab ee koonfurta Somalia ka dagaalanta, laakiin waxa uu qiray in kooxdiisu doonayso in meelaha ay ka taliyaan ay shareecada Islaamka ku dhaqaan, taaso waliba, sida uu sheegay, ay la qabaan cuqaasha iyo waxgaradka degan deegaanka uu ku sugan yahay.
Dhinaca kale qarax maanta ka dhacay saldhig ku yaal magaalada Boosaaso waxa ku dhaawacmay saddex ka mid ah askartii joogtay saldhiga, halka qofka afraadna uu yahay qof rayid ah sida ay sheegeen dad goob joog ahi.
Ciidanka jooga salldhiga ayaa rasaas badan furay ka dib qaraxa, waxayna sameeyeen baaritaan ay ku soo qabteen afarta qof oo hadda gacanta lagu hayo.
Qaraxan ayaa dhacay xilli shaley gelinkii hore saraakiisha boolisku sheegeen in ay qabteen miino dhulka lagu aasay oo aan qarxin taasoo laga heley wadada laamiga ee dhex marta magaalada.
Amniga magaalada Boosaaso ayaa sii xumaanayay maalmihii u danbeeyay, iyada oo uu ka jiray kacdoon iyo xamaasad ,oo magaalada ay hadheeyeen dagaalada ka socda buuraleyda Galgala,halkaas oo ay ku dagaalamayaan ciidanka deegaanka iyo ciidanka Puntland oo u badan kuwa ay dadku u bixiyeen Ashahaado-la-dirirka ee loosoo gaabiyo (PIS).
Dagaalada ka socda halkaa ayaa sababay in magaalada hadaaftimo ee Gobolka Sanaag dadweyne farabadan oo isugu jira rag iyo dumarba, isugu soo baxeen, kuwaas oo socod ku maray jidadka magaalada iyagoo ku dhawaaqayey “Doonimayno FAROOLE BEERA GUBE” taas oo ay iyagoo ula jeedaan madaxweynaha puntland oo la sheegay in ciidamadiisu gubeen Beero badan oo ku yaaley magaalada GALGALA markay qabsadeen halkaa.
dareenkan dadka kiciyey ayaa yimid Ka dib markii maalmihii la soo dhaafay dagaalo ka dhaceen deegaanka GALGALA oo ay kula wareegeen ciidanka puntland deegaanka galgala, isla markaana la sheegay in ciidamada darawiishta puntland ay gubeen Beerihii halkaas ku yaaley ee dadku lahaa, iyadoo deegaanka Galgala ay caan ku tahay Beeraley, isla markaana ay Timirtu aad uga baxdo deegaankaa.